Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Faly mifanome tsiny fotsiny
Politika : Faly mifanome tsiny fotsiny
Tsy mahagaga raha tsy mandroso i Madaga­sikara. Raha izao toe-tsaina mbola iainana amin’izao fotoana izao dia tsy mendrika ny anarana hoe mpanao politika intsony ny mpisehatra izany eto Madagasikara. Ny mpanao politika dia mitady hatrany ny fampandrosoana sy ny hahatsara ny vahoaka ao aminy.
Eo anatrehan’ny fiverenan’ny aretina “covid-19” izao dia tsy ahenoana feo ny mpanao politika Malagasy. Ny mpitondra firenena tsy dia hita loatra hatramin’izao izay tena tiany hatao. Mihazohazo tsy manan-kambara ny fitondrana. Hanao vakisiny sa hampiasa CVO sy CVO+ ve? Tena miteraka ady hevitra be amin’ny tontolo ny fiaraha-monina ity raharaha ity. Eo anatrehan’izany dia sahiran-tsaina toa ny olona tsy manandray amandreny ny vahoaka. Tsy manam-piahy tsy mahita làlan-kaleha.
Ankilany indray dia tena zava-doza no mitranga. Miandry kendritohana sy mirary ny hisian’ny loza be ny mpanao politika mpanohitra ny fanjakana hiampangana amin’ny vahoaka fa tsy miraharaha izay fiainam-bahoaka velively. Raha ny eritriritrin’ireo mpanohitra ireo dia ho be dia be ny olona hahary sy ho faty mba hikorontanan’ny firenena. Tena zava-doza no tadiavin’izy ireo hiapangana ny mpitondra. Tsy manana hevitra na kely ho entina hiadiana amin’ny aretina izao. Na dia fanentanana fotsiny hoan’ny mpiara-belona amin’ny fiarovana amin’ity aretina ity dia tsy ataon’izy ireo. Na fanampiana mivantana toa ny vola na ny fitaovana ilaina amin’ny fiarovana faran’izay kely aza dia tsy misy nataon’izy ireo hatramin’izay. Ny manavanana ny mpanohitra dia fitadiavana izany mangaraharaha amin’ny fitantanana ny vola avy amin’ny mpamatsy vola avy any ivelany ihany. Hanao fiarahana mitantana hono.
Taratrin’ny fahadalana eto amin’ny firenena ny toe-tsaina ananan’ny mpanao politika amin’izao fotoana izao. Tsy mendrika izany anarana izany velively. Tsy hisy fandrosoana izany eto Madagasikara raha toa ka ambany dia ambany toa ny ady hevitra misy amin’izao fotoana izao no hitondrana ny firenena. Fanimbana ny taranaka sy ny ho avy no misy.
Fotoana tokony hanovana ny fomba fanaovana politika izao ka hijerena fomba fijery mifototra amin’ny fijery tena izy. Raha mbola ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola no mibaiko ny mpanao politika Malagasy dia inoana fa tsy ho tafarina mandrakizay ity firenena ity. Arakaraka ny fandrosoana any amin’ny fiovana no nahapotika ny firenena satria olona tsy mieritreritra firenena manao politika.
Faly mifanome tsiny fotsiny ny mpanao politika Malagasy.
Tolom-bahoaka : revy fotsiny fa tsy nisy nilana azy
Fahoriam-bahoaka : Tsy laharam-pamehan’ny depiote
Rafi-pitsarana manokana : Tsy misy dikany raha manjaka ny kolikoly
Digin’i Fenoarivo : Tsy misy jiro intsony na iray aza
Fiotazana lavanilina maitso : Niteraka resabe ny daty navoaka
Fanovana fiantsonana vonjy maika : Hihena ny fitohanana lavareny
Lalana eny Andohatapenaka : Tsy raharahin’ny Fanjakana ilay lavaka be
Volan’ny FER : Natao antoka tsy hampisondrotra ny vidin-tsolika
Vehivavy mpandraharaha : Nisedra olana nohon’ny krizy nifanesy